DF Somalia lacagaha ay garoomada ku dhisayso dhinacyo ka MUDAN baa badan! | Hadalsame Media
Home Maqaallada DF Somalia lacagaha ay garoomada ku dhisayso dhinacyo ka MUDAN baa badan!
DF Somalia lacagaha ay garoomada ku dhisayso dhinacyo ka MUDAN baa badan!
(Hadalsame) 09 Sebt 2019 – DF Somalia ayaa marba marka ka dambaysa soo xoogaysanaysa, waloow ay weli wax aad u badani harsan yihiin kahor inta lagu tilmaami karo dowlad si buuxda u qabanaysa howlihii loo igmaday, taasoo ay ka horreeyso inay gacanta ku wada dhigto talada dalka.
Ha yeeshee, waxay beryahan waddey mashaariic dib loogu dhisayo ama gebi ahaanba hadda uun lagu dhisayo garoomo cusub oo lagu ciyaaro kubadda cagta, waa wax wanaagsan in muddo dheer kaddib la arko dowlad lacago u qoondaynaysa mashaariic heer bulsho ah, balse cillad baa jirta.
Mashaariicda noocan ah waa in ay ku wajahnaadaan meesha ay ka jirto baahida ugu fara badan, dalkuna hadda wuxuu u baahan yahay in laga qabto kumannaan walxaato oo kubad la laado ka muhiimsan, tusaale ahaan, amaanka, isbitaallo, iskuullo, jidad, amaanka, amaanka iwm ayay tahay inay ugu horreeyaan.
Sawirkan aad arkaysaa waa buundada Baardheere, waxay tusaale wayn u tahay dayaca haysta kaabayaashii dalka, iyadoo buundooyinkan oo la dhisay muddo aad u fog aysan helin wax dayactir ama bedelitaan ah.
Previous articleSomalia oo maanta taagan FINAL kale oo CAALAMI ah (Waa halkee?)
Next articleDAAWO: Somalia oo Kenya u dhigtay cashar DIBLOMAASIYADEED (Khilaaf gudeed soo ifbaxay)